Hodan iyo Xamarweyne oo kulanka ugu xiisaha Badan maanta wada qaadanaya, maxaad ka ogtahay Taariikhda Kulanka iyo Guulaha labada degmo??
Sunday, June 16th, 2019 - 19:38:12
Thursday September 13, 2018 - 09:35:29 in Wararka by Muuse Cabdi
Kulan ka tirsan Tartanka Degmooyinka Gobolka Banaadir ayaa maanta dhexmaraya kooxaha, Degmada Hodan iyo Degmada Xamarweyne, waxaana ciyaartan ay ka mid tahay kuwii ugu xiisaha badnaa kulamada laga soo ciyaaray tartanka Sanadkan.
Kooxda Degmada Xamarweyne ayaa lagu xasuustaa in ay hanatay Koobkii Degmooyinka ee la qabtay Sanadkii 2014-kii, waxayna maanta foodda is dari doonaan kooxda Degmada Hodan oo Sanadihii dambe bandhig fiican ka sameyneysay Tartanka Degmooyinka Gobolka Banaadir.
Degmada Hodan ayaa Sanadkii lasoo dhaafay soo gaartay Final-ka Koobkan, iyadoo heysata ciyaartoy si wanaagsan isula ciyaar fahansan.
Sanadkan horyaalka Degmooyinka Gobolka Banaadir kooxaha ugu wanaagsan ayey ka mid yihiin labada degmo ee maanta uu Loollanku u dhexeeyo.
Kulankan ayaa sidoo kale wuxuu yahay mid laga filayo taageerayaal badan iyadoo degmooyinkan ay ka mid yihiin kuwa Taageerayaasha Xamaasadda Badan leh ee ka qeyb gelaya Horyaalka Degmooyinka Gobolka Banaadir.